जानि राख्दा राम्रो: यस्तो हुन्छ रायोको साग खानुका फाईदा - काभ्रे पोष्ट
गर्भवतीलाई लाभ गर्छ- गर्भवती महिलालाई वाकवाकी आउने, टाउको दुख्ने आदि समस्या देखिन्छन् । शरीरमा भिटामिन केको कमीका कारण यस्तो हुनेगर्छ । रायोको सागमा भिटामिन के प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले यो गर्भव्ती महिलाका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
मुटु बलियो बनाउँछ – मुटुसम्बन्धी हरेक खालका समस्या भएकाले अथवा मुटुसम्बन्धी रोग नलागोस् भन्ने चाहनेले रायोको साग खानुपर्छ ।
स्मरणशक्ति बढाउँछ – उमेर बढ्दै गएपछि दिमागको सम्झने क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ । प्रतिदिन तीन पटक रायोको साग खाएर स्मरणशक्तिमा आउने ह्रासको समस्यालाई ४० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
महिनावारीमा राहत दिन्छ – रायोको सागमा पाइने भिटामिन–केले महिनावारीका बेला जीउ दुख्ने समस्याबाट राहत दिन्छ ।
शरीरका विकार फाल्छ – रायोको सागमा भिटामिन ए, सी र के प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यी तीनटै तत्वले एन्टी अक्सिडेन्टको काम गर्छन् । रायोको सागमा पाइने म्याग्नेसियम र फोलेटजस्ता तरल्ले शरीरमा जम्मा भएका विकारलाई विभिन्न माध्यमबाट शरीरबाहिर निकाल्छन् ।
बाथका रोगीलाई राहत दिन्छ- रायोको सागले बाथका रोगीलाई राहत दिन्छ । यसमा कपर पाइन्छ, जसले बाथको पीडालाई कम गर्छ । – एजेन्सी
Tagged #रायोको साग
रुकुम पश्‍चिम घटनाको छानविन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन
शरीरका यी अंगहरुमा परफ्युमको प्रयोग कति खतरनाक ?
अध्ययन भन्छ : झुट नबोली बस्नै सक्दैन मान्छे
के घरमा ‘मनीप्लान्ट’ रोप्दा पैसा आर्जन हुन्छ ?
May 19, 2020 May 19, 2020 काभ्रे पोष्ट